Dalalka Beesha Caalamka Ee Taageera Doorshooyinka Somaliland Oo Lacagta Ay Bixinayaan Saddex Qodob Ku Xidhay – somalilandtoday.com
Dalalka Beesha Caalamka Ee Taageera Doorshooyinka Somaliland Oo Lacagta Ay Bixinayaan Saddex Qodob Ku Xidhay
(SLT-Hargeysa)-Dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka dimuquraadiyadeed ee Somaliland ayaa la sheegay in ay saddex qodob doonayaan in la xaliyo si ay u maalgeliyaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee la qorsheeyey in ay qabsoomaan sannadka dambe ee 2019-ka.
Dalalkii hore u ballan qaaday in ay bixiyaann inta badan lacagta ku baxaysa doorashooyinka kal danbe ayaa waxa ay doonayaan in Somaliland xalisp saddex qodob oo ay u arkaan in ay caqabad ku noqon karaan in doorashooyinku qabsoomaan – sida lagu daabacay wargeyska geeska Afrika oo Hargeysa ka soo baxa.
Saddexda qodob ee ay doonayaan in la xaliyo dalalka beesha caalamka ee doorashooyinka ka taageera Somaliland
1. In baarlamaanka Somalialdn anksixiyo kuraas gaar ah oo kooto loogu xidhayo haweenka Somaliland.
2. In xal laga gaadho khilaafka u dhaxeeya xisbiga Waddani iyo guddiga doorashooyinka Somaliland.
3. In xal nabaddeed lagu dhammeeyo dagaalka Tuke-raq.
Dalalka reer galbeedka ah ayaa la sheegay in ay aad xoogga u saarayaan qodobka koobaad ee kootada haweenka iyo qodobka labaad ee xal ka gaadhista khilaafka Waddani iyo guddiga doorashooyinka, si ay u qabsoomaan doorashooyika golaha deegaanka iyo wakiiladdu.